1 Indlela yokusebenzisa facetime on iPad – download facetime for iPad facetime on iPad ayisebenzi
2 FaceTime kwi iPad:
3 Ultimate Guide to Qala FaceTime on iPad:
4 Vula Face Ixesha Uphawu on I lakho Pad:
5 Sebenzisa Face Ixesha Call On iPad:
5.1 Nqakraza kwi icon Face Time:
5.1.1 Fumana sakho Qhagamshelana:
6 Contact ulwazi Panel
6.0.1 Beka ividiyo okanye umnxeba ezimanyelwayo zomfowunelwa okhethiweyo:
6.1 Okungakumbi ukusuka kwindawo yam
Indlela yokusebenzisa facetime on iPad – download facetime for iPad facetime on iPad ayisebenzi
Khuphela ixesha le-iPad
Apple ebesoloko bazisa kakhulu yenza. Kuye ngokuqhubekayo ugxininiso ukuqalisa ezo apps okanye isoftware unokubangela kunye lula kubaxumi bayo. Ifuthe zosasazo zasekuhlaleni eye kakhulu ziyanyuswa.
download facetime iPad
facetime for Android ukuba iPad
facetime app for umxokozelo iPad
Abantu kuzo zonke ubudala bafuna ukuhlala udibanise kunye namanye. Ngenxa yale njongo, Apple yenzelwe a app videotelephony enisinike uyazi njengoko FaceTime kubathengi bayo.
yi kuphela Le app yenzelwe bonke abasebenzisi Apple usebenzisa iPhone, IMac, iPod, no iPad. Phakathi kwazo zonke ezinye izixhobo of Apple, abantu abathanda ukusebenzisa iPad. screen Its ngokubanzi kwaye isiphumo umgangatho ukuba abathengi onwabele iimpawu zayo zokusebenza ngokuphawulekayo njengoko kuthelekiswa nezinye izixhobo.
Ungasebenzisa FaceTime on iPad ukuba abe nembono ebanzi yakho yevidiyo. Eli nqaku liza kukuxelela anzulu ukubaluleka, ukulanda, ukufakwa, lokusebenzisa, kunye neempawu Face Ixesha iPad.
FaceTime i ividiyo emangalisayo kunye audio app ubizo ukuba ekuqaleni owadala iPhone4, kodwa imfuno ephakamileyo anyanzela Apple ukuba ifumaneke kubasebenzisi iPad ngokunjalo. iPad ikunika iinkalo ezahlukeneyo, kodwa enye yezona zinto enomtsalane ukuba unako lula ukubeka ividiyo okanye audio iminxeba nge FaceTime.
Ungasebenzisa Face Ixesha ukuba oqhagamshelwano phakathi nomnye umsebenzisi ngamnye iPad ne Mac OS 10.6.6 okanye kwiinguqulelo kamva. Wena nje kufuneka ukufumanisa ukuba umntu Apple layo Id. Ividiyo and audio iminxeba nge FaceTime ngenene free. Ungasebenzisa uqhagamshelo lwakho intanethi okanye iinkcukacha zeselula ukuqala ngokubeka iminxeba.
FaceTime kwi iPad:
Kwandile FaceTime app ezicwangciselwe abasebenzisi iOS kubandakanya iPhone, iPads, iPod, and Mac. Le app ikuvumela ukuba uhlale uqhagamshelana xa kude nosapho lwakho, abahlobo, ishishini, kunye nabasebenzi.
Ukuba ukhangela usebenzisa le app videotelephony ophawulekayo iPad yakho, ngoko ungakhathazeki wena musa ukuba benze nantoni na. Apple sele abafake FaceTime app kwi iPads lwakho.
Kufuneka nje ID yakho Apple ukwenza le FaceTime app pre-efakwe kwi iPads yakho. Oku kufuneka umdla ukwazi ukuba xa une iPad yakho, ukulungele ukwenza ezikumgangatho ophezulu yevidiyo okanye audio iminxeba nge FaceTime ngaphandle les okanye inkqubo ende wokulanda.
Ngoncedo lwe FaceTime on iPads, ungenza ngokulula ukwenza okanye ukufumana ividiyo engenasiphelo neefowuni audio. Njengoko le app for iOS abasebenzisi kuphela, ukuze kuphela ukwenza ividiyo okanye zeefoni iminxeba kwabo kubasebenzisi abasebenzisa iPhone, IMac, iPod, kunye nezixhobo iPad. Uyakwazi ngqo ukubeka ucingo kubasebenzisi iPad ngokusebenzisa id lwabo email efumaneka ngokuqhelekileyo kuludwe lwabafowunelwa.
Ultimate Guide to Qala FaceTime on iPad:
iPad 2 okanye emva ine ikhamera ku eyakhiwe lula ukuba ukuqhuba wevidiyo nge FaceTime. Le app interactive kukuvumela ukuba uthethe nabo ubathandayo xa kwi kude kubo.
Face Ixesha nge iPad ikunikeza zonke iimpawu abadumileyo kodwa aninako ukulungisa izwi layo lokusebenza lalo kunye nani aninako ukwenza ukurekhodwa yakho wevidiyo. Yima nzu, inikeza zonke ezinye iinkalo ezibalulekileyo ezenza kube nokhuphiswano ukusebenzisa.
Vula Face Ixesha Uphawu on I lakho Pad:
Eyona nto ibalulekileyo, ngaphambi kokuba usebenzise Face Ixesha e iPads yakho, qiniseka ukuba uyiguqulele kuwe kwi pre-efakiweyo Face Time feature, ungakwenza oku ngokuthi:
Yiya kwi menu isicwangciso efumaneka kwi-Home Page of iPad yakho.
ke, nqakraza kwi Face Ixesha Upohawu siyivule ukuqalisa.
Unako kwakhona alandele inkqubo efanayo ukuba ufuna ukucima okwethutyana ifitsha evela iPad yakho.
Kwi setting menu lwe iPad yakho, Ungakhetha kwakhona uluhlu lwabo bonke abafowunelwa ofuna ukuba ihlanganiswe nge FaceTime. Ungakwenza oku ngokukhetha iidilesi zabo e-mail kunye akhawunti phone.
Sebenzisa Face Ixesha Call On iPad:
Uyakwazi kuphela ukubeka iminxeba nge FaceTime wakho kwabanye abasebenzisi isixhobo Apple. Oku kuthetha ukuba unako ukufumana eqhagamshelana nge Face Ixesha kunye nabanye abasebenzisi abasebenzisa
iPad 2 okanye kamva, okanye
Mac OS X 10.6.6 okanye
iPhone4 okanye kamva okanye
Okwesine-isizukulwana iPod touch okanye kamva
Ngaphambi kokuba nasiphi na abasebenzisi isixhobo Apple of, qiniseka ukuba udibanise ukuba abafowunelwa iPad. Ukubeka ividiyo okanye umnxeba umsindo isebenzisa iPad yakho siziphekuze lula. Wena nje ukuba ulandele amanyathelo ezimbalwa kubandakanya.
Nqakraza kwi icon Face Time:
Njengoko kuchaziwe ngaphambili, Face Ixesha inkalo pre-efakwe kwi iPads yakho. Unga lula ukufumana icon yayo kwi ikhaya kwesikrini iPads zakho. Xa uya nqakraza kwi icon Face Time, iya kucela ukuba unike iinkcukacha ezifunekayo.
Umele ukuba ufake i id ye-imeyile kunye nenombolo yefowuni lowo ufuna ukuqala incoko. Emva kokuba afike umfowunelwa ofunekayo, kufuneka nje ucofe iqhosha elilandelayo.
Fumana sakho Qhagamshelana:
On the screen engundoqo app lwakho FaceTime, uya kufumana uludwe lwabafowunelwa eziza kuvela kwicala lasekunene screen sakho. Xa uya kufumana ingxelo zomsebenzisi ukuba ufuna ukuqhagamshelana, nje nqakraza kwigama layo okanye.
Ngokunqakraza igama lakhe, ungafumana lonke ulwazi olubalulekileyo yaloo umsebenzisi. Olu luhlu lubonisa Inani ekhaya, inombolo kanomyayi, idilesi yeimeyile kunye nezinye ukhetho njengokwaba zoqhagamshelwano, ukongeza kokuthandayo kwaye ukuvimbela le ufu-.
Contact ulwazi Panel
Beka ividiyo okanye umnxeba ezimanyelwayo zomfowunelwa okhethiweyo:
Xa kufikelele yingcaciso umsebenzisi othile, kufuneka nje ukugcina okanye inombolo yakhe okanye email- idilesi. Kufuneka ukugcina ulwazi inter-eziqhotyoshelwe Face Time kuphela.
Emva ungqamaniso wedatha efunekayo, kufuneka nje ucofe iqhosha ividiyo okanye umnxeba audio. Yaye kunandipha enye ividiyo kakhulu omthandayo iinkonzo zehlabathi ukubiza.
Ngoko Ngokwenjenje ulwazi inceda ukuba uqale wenze FaceTime on iPad nto leyo umsebenzi kulula ukuba wenze uwedwa. Ndiyathemba iinkcukacha wakunceda uxhumane kunye nabahlobo bakho kunye neentsapho. Do share with your friends and families so that they can also know the use of Face Time on iPad.